Agba ahịhịa, mmanụ agba agba ahịhịa, watercolor agba agba ahịhịa - Fontainebleau
Nanchang Fontainebleau Ihe Ndị Na-ese Ihe Industrial Co., Ltd.
Nanchang Fontainebleau Painting Materials Industrial Co., ltd ọkachamara na mmepụta na ire ahịa nke ndị na-ese ihe, nke gụnyere watercolor / mmanụ / acrylic / brushes mara mma na brushes mara mma. Ha nwere akara aka ha - Golden Maple, a mara ya dịka otu n'ime ihe osise kachasị mma na agba na China. Ha na-enye ụdị ọrụ OEM dị iche iche, nwekwara ike inyere gị aka ịmepụta ahịhịa na ika gị. Ọbụlagodi na inwere data brush, ha nwere ike imepụta ya, dị ka arịrịọ gị si rụpụta ọtụtụ brushes dị iche iche.
Kedu ka ndị mbido si azụ brushes brushes? Ihe ndị a bụ ụfọdụ akụkụ dị mkpa m chịkọtara mgbe ịzụrụ brushes ndị a. Nke mbụ, ọdịdị nke ahịhịa N'ozuzu, a na-eji brush gburugburu. Otutu n'ime ha nwere ike kewaa, ya mere, agagh m abanye na nkọwa ebe a ....
Typesdị ụdị brushes nke artiest anyị na-ejikarị eserese bụ ndị a: firstdị nke mbụ bụ eriri anụ ahụ, nke bụ bristles. Gụnyere bristles, wolf ntutu, mink ntutu na na. Akụkụ nke abụọ bụ eriri kemịkal. Anyị na-ejikarị naịlọn. Bristles New artiest sere ahịhịa na-zụtara ime ...
Kedu otu esi amata ọdịiche dị na brushes?
Usoro mbufepu Wepu otu n'ime ahịhịa site na ahịhịa ma gbaa ya ọkụ. Enwere isi ísì ụtọ n'oge usoro ọkụ, ọ na-aghọ ntụ mgbe ọ kpọchara ọkụ. Nke a bụ ezigbo bristles. The adịgboroja ahịhịa adịghị atọ ụtọ ma ọ bụ nwee isi nke plastik mgbe ha na-akpọ ọkụ. Mgbe ...
About factory, ọ na-agba ọsọ ihe karịrị afọ 30, nwere ọgaranya ahụmahụ na rụpụta omenka agba ahịhịa.
The elu ngwaahịa mma na àgwà management usoro nwere ike ime ka ibu otu ihe na egosi samples.
OEM na ika gị
Anyị na-enye ọrụ OEM maka onye na-ebubata ngwaahịa / onye na-ere ahịa / ụlọ ahịa. OEM ika ebipụta na ahụ na mbukota dị.
Nri Nri Na Achicha
Nnukwu ahịhịa maka ihe osise
Eserese Na ihu na Isi
Obere ahịhịa Na Kit Garage